ကန်ကြီးထောင့် ဟွာမှုံသပိတ် အစိုးရ တာ၀န်ခံစာချုပ်ပေးမှုနဲ့ ပြေလည်
ကန်ကြီးထောင့် ဟွာမှုံသပိတ် အစိုးရ တာ၀န်ခံစာချုပ်ပေ...
14 ม.ค. 2563 - 23:20 น.
ပုသိမ်မြို့အနီး ကန်ကြီးထောင့် ဟွာမှုံသပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရာနဲ့ ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဟာ ကြွေးကြော်သံတွေရပ်ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ မနက်၇ နာရီခွဲမှာ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင် သွားကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၆ ရက်ကြာ မြင့်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားသပိတ်ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းက အလုပ်ရှင် နဲ့ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်တွေကြား သဘောတူချက်တွေ လက်မှတ်ထိုးပြီး အဆုံးသတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ အချက်၈ချက်ကို အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက စီမံညွန်ကြားချက်ဆိုကာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေ သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာချုပ်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ဥပဒေလမ်းကြောင်းက ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ပေမယ့် ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ပြေလည်အောင် တာဝန်ခံပြီး ဝင်ရောက် ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သဘောတူစာချုပ်မှာ လက်မှက်ရေးထိုးခဲ့သူ အလုပ်သမား အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရေးအဖွဲ့ က ဒေါ်ခခက ပြောပါတယ်။
ရက်ပေါင်း၂၀ ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ ပုသိမ်မြို့ အနီးက အထည်ချုပ် အလုပ်သမားသပိတ်။
အခုသဘောတူလိုက်တဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ တော့ အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ဖယ်ရီ စီစဉ်ပေးဖို့ကိစ္စ ချက်ချင်း မရခဲ့ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေဘက်က မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ချုပ်ဆိုပေးခဲ့တဲ့ စာချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်ခခက ပြောပါတယ်။
စာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင်တော့ ဒီစာချုပ်ဟာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သဘောတူချက်ထဲမှာ အလုပ်သမားဥပဒေတွေ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို မဖောက်ဖျက်ရလို့ ပါပါတယ်။ တစ်ဘက်ဘက်က ချိုးဖောက်ရင်တော့ ဥပဒေတွေနဲ့အညီ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စိစစ်ရေးဌာနက အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုတော့ ထည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်း ဒေါ်ခခက ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ သပိတ်မှောက် တောင်းဆိုရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အစကတော့ ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မလိုက်နာတာ၊ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေက အော်ဟစ်ခိုင်းစေတာ၊ အမျိုးသမီးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာ၊ အလုပ်သမားဥပဒေတွေကို မလိုက်နာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ လည်းသပိတ်မှောက်တဲ့ အလုပ်သမားတွေဘက်က ပြောပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ တောင်းဆိုချက် ၅၇ ချက်ကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်မှာ စတင်စုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် တောင်းဆိုချက်တွေအနက် သဘောတူညီဖို့ကျန်တဲ့ အချက်ရှစ်ချက်ကို အလုပ်သမား ခုံသမာဓိရုံးကို တက်ရောက် တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုံသမာဓိရုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်လာရာမှာတော့ မကျေနပ်ရှိ လို့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် မှာ စက်ရုံဝန်းထဲမှာ စသပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်နေ့က စပြီး စက်ရုံဝန်းအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် မရတော့လို့ စက်ရုံရှေ့လမ်းမကြီးမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး ဆက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သပိတ်စခန်း စဖွင့်ပြီး ခုနစ်ရက်မြောက်နေ့ မှာဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီး သပိတ်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့ မရုပ်သိမ်းရင် အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမယ်လို့ သတိပေးပြီးနောက်မှာ သပိတ်စခန်းမှာ အင်အား ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီသပိတ်မှောက်မှု ဟာ ၃၆ ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း၃၀ ကျော်အတွင်း ရက်အရှည် ကြာဆုံး အလုပ်သမားသပိတ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ၂၂ရက်နေ့ကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို မှာ ကန်ကြီးထောင့်မြို့ အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အင်အား ၁၀၀၀ ခန့်က ပုသိမ်မြို့ အတွင်း စီတန်းလှည့်လည် ကြွေးကြော် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါအပြင် ညှိနှိုင်းနေစဉ် ကာလမှာလည်း သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားတွေဟာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရုံးရှေ့မှာ စောင့်ဆိုင်းတာတွေ၊ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတွေ့ဖို့ တောင်းဆိုတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒါဟာ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုတွေမှာ ဥပဒေ အရ ရှင်းတာထက် အခုလို တိုင်းအစိုးရကို ဖြေရှင်းခိုင်းတာတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်းကနေ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကို ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတွေက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အလုပ်ရှင်- အလုပ်သမားဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာရင်တော့ တိုင်းအစိုးရကို ဖြေရှင်းဖို့ အခုလို တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်လာစရာ မရှိဘူးလို့ လည်း ဒေါ်ခခက ပြောပါတယ် ။
ဒီသပိတ် မှောက်လှုပ်ရှားမှုဟာ အခြေခံဌာနဆိုင်ရာကတဆင့် ဝန်ကြီးချုပ်အထိ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပေါင်း ၈ကြိမ်တိတိ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သပိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ သပိတ်မှောက် လုပ်သားတွေဘက်ကတော့ အလုပ်သမား ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အမှန်တရား ဂုဏ်သိက္ခာ ရရှိခဲ့တဲ့ သပိတ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ် ။
อัลบั้มภาพ ကန်ကြီးထောင့် ဟွာမှုံသပိတ် အစိုးရ တာ၀န်ခံစာချုပ်ပေးမှုနဲ့ ပြေလည်